Ronono sy karibonetra, mitsabo tongotra vakivaky
Anisan’ny toe-javatra tena manahirana amin’izao vanim-potoan’ny ririnina izao ny tongotra vakivaky. Ity misy fomba iray mbola tsy faheno loatra, azo entina mitsabo izany.
· Ronono 2 hatramin’ny 3 tasy
· Karibonetra 3 sotro fihinanana
Afanao ny ronono, aza andrasana hangotraka fa rehefa mafana dia esory eo ambony afo. Araraho ao anaty koveta izay antonona ny tongotrao izany. Lomy ao mandritra ny 5 mn ny tongotra. Rehefa vita izay dia koseho amin’ilay karibonetra, toy ny manao “gommage”, ilay faritra misy vakivaky. Avereno ao anatin’ilay koveta misy ronono mandritra ny 10 ka hatramin’ny 15mn indray ny tongotra ary kobano amin’ny rano matimaty. Farano amin’ny fanosorana akora manamandina fanaonao mahazatra amin’ny tongotra.
Voka-tsoa entin’ny ronono sy ny karibaonetra
Efa fantatra efa hatry ny ela fa manatsara hoditra ny ronono. Manamandina izy ary manampy amin’ny fiforonan’ny sela vaovao. Manala ireo mety ho mikraoba amin’ilay vakivaky kosa ny asan’ny karibonetra. Tena mandaitra amin’ny tongotra vakivaky, araka izany ity paipaika ity.